अम्बाको पात मोटोपन घटाउनदेखि मधुमेह सम्मको लागि बहु उपयोगी । – Nepal Online Khabar
March 28, 2021 281
￼काठमाडौं : अम्बा एक मीठो फल हो । पाकेर मात्र नभएर काँचै पनि खान सकिने र मीठो हुने यो फलको बोटको पात पनि उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिं कमैलाई थाहा छ ।
अम्बाको पात विभिन्न रोग देखि छालालाई सुन्दर बनाउन सम्म उपयोगी हुन्छ । अम्बाको पातले मोटो’पन समेत घटाईदिन्छ ।
अम्बाको पातले मधुमेह रोगलाई भगाउन मद्दत गर्छ । यो पातले शरीरमा अत्यधिक ल्याक्टोज सोस्न र चिनी उत्पादन गर्न कम गरिदिन्छ
जसले गर्दा चिनी रोग भएका बिरा’मीलाई समेत यो लाभदायक हुन्छ । यी गुणले गर्दा चिनी रोग अर्थात मधुमे’ह भएका व्यक्ति र मोटोपना घटाउन चाहने व्यक्तिले अम्बाको पातको धुलो खानु राम्रो हुन्छ । यसलाई सुकाएर धु’लो बनाएर चुर्णको रुपमा खान सकिन्छ ।
अम्बाको पातले हाड जोर्नीको दुखाई पनि कम गरिदिन्छ । अम्बाको पातलाई थिचेर दुखेको ठाउँमा लगाउनाले दुखाइ कम हुन्छ । पातलाई थिचेर त्यसलाई तातो बनाएर लगाउनु पर्छ ।
अम्बाको पातलाई थिचेर त्यसको रस निकाल्ने र त्यसमा थोरै पानी मिलाएर पिउनाले स्वप्नदोषबाट छुटकारा मिल्छ । अम्बाको पातको रसले पखाला निको हुनुका साथै पाचन प्रक्रिया राम्रो बनाइदिन्छ ।
अम्बाको पातले दांत र गि’जाको समस्या पनि समाधान गरिदिन्छ। अम्बाको पात थिचेर, त्यसको रस पिउनाले कोले’स्ट्रोल पनि घटेर जान्छ । अम्बाको पातले एलर्जी पनि निको पारिदिन्छ । यसको नियमित सेवनले एल’र्जी आउने सम्भावना पनि हराईदिन्छ ।
अम्बाको पात सुन्दरताको लागि पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ । अम्बाको पात थिचेर डन्डीफोर भएको ठाउँमा लगाउनाले डन्डी’फोर निको हुन्छ । अम्बाको पात चपा’उनाले मात्र पनि अनुहारमा चम’क आउँछ । अम्बाको पात कपालको लागि पनि राम्रो हुन्छ । यसको रस कपालमा लगाउनाले कपाल सिल्की हुने, छिटो बढ्ने हुन्छ ।
Prevरङ्गशाला भत्काएरै छाड्छु, भन्ने तारा बराललाई ज्वाला सङग्रौलाले दिइन सुझाव ! हद गरे युवाले कारवाहि गर्ने चेतावनी ।
Nextइन्द्रेणी मार्फत यति धेरै रकम रबि लामिछानेलाई प्राप्त भएपछि खुशि हुँदै कृष्ण कँडेल लाई दिए धन्यबाद – हस्तान्तरण (विवरण सहित )
कसरी भयो अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेलको इन्ट्री ? यस्तो छ कारण…हेर्नुहोस् ।
अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्दै माधव नेपाल, यस्तो छ तयारी…हेर्नुहोस् ।
देसै भरी बिरोध प्रदर्शन भैइरहदा डरायो सरकार कुलमान घिसिको समर्थन देखेर…हेर्नुहोस् ।